DHEGEYSO-Dhalinyarada xirfadleeyda ah oo kusoo badanaysa magaalada Boosaaso. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Dhalinyarada xirfadleeyda ah oo kusoo badanaysa magaalada Boosaaso.
Agoosto 7, 2016 11:48 g 0
Boosaaso, Aug 08 2016–Magaalada Bosaaso Waxaa ku nool Dhalinyo kooban oo ku shaqaysta Xifafadaha Gacanta laga Qabto Waxayna ay sameeeyaan oo ay soo saaraan intabadan Qalabka Dibadaha nalooga keeno oo ay kamidyihiin Sanaaduuqda tanaagta shidaalka Agabka lagagaga shaqaysto Beeraha Burjikooyinka iyo wixiilamid ah.
Hadaba Asad yuusuf cali iyo maxamed Barqad Saleeebaan Waxa ay ka midyihiin dhalinyarada Xirfadan ku shaqaysta Waxa ka shaqeeeyaan Goob loogu magacdaray Rugta farsamada Sanaadiiiqda ee Alxikma Waxaa saaka goobtaasi ku booqday Wariye Xasan Heykal oo kusugan Daljir Bosaaso uguhoreena Waxa uu waydiiyay Waxa ku dhaliyay in shaqad aya qabtaan.
DHEGEYSO-Warbixin xiisabadan oo aan ka diyaarinay doorashada Soomaaliya.